Author: Mehn Taunos
Dowlada federaalka ah iyo maamul goboleedyada ayaa qorsheynaayo in dastuurka cusub soomsaliya diyaar noqdo ka hor doorashada qof iyo cod ee lagu wado in ay dhacdo ka. Qodob kale oo Warar ah. Sign in Recover your password. Balse waxaa jira xaqiiqo aanan ka qarin karin Bulshada Soomaaliyeed oo ah in aan weli wax la taaban karo la qabanin dhowr caqabadood darteed.
Lahaanshaha sawirka a Image caption Dastuurka Somalia Wasiirka dastuurka ee dawladda federalka Somaliya Cabdiraxman Xoosh Jibriil fastuurka sheegay inay meel gabagaba soomaalyia marayso hawsha dastuurka inkastoo uu tilmaamay inay weli jiraan talooyin iyo faallooyin ay dastuurka ku yeeshaan madaxda sare ee dawladda iyo saxiixayaasha Road mapka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa madaxa Qaranka iyo xukuumadda, waana astaanta midnimada Qaranka.
Waxaa ay kala ahaayeen sidatan; DastuurkiiDastuurkiimidkii la diyaariyey iyo kan hadda aan haysano ee Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka 1 Madaxweyne ku-xigeenka wuxuu caawiyaa madaxweynaha, wuxuu noqodaa sii siomaaliya jagada madaxweynaha marka Madaxweynahu dalka uga maqanyahay dibada ama ay ku timaado sabab uu u gudanwaayo xilkiisa.
Wasiirka oo BBC-da u warramay ayaa tilmaamay in go’aanka ugu dambeeya ee dastuurka uu iska leeyahay golaha ansixinta hase ahaatee marka hore guddiga madaxa bannaan iyo guddiga khubarada ay soo dhammaystiraan hawshaas oo uu wasiirku sheegay in xilligan ay soo afjarantay ayna hartay oo keliya talooyinkii madaxda sare iyo saxiixayaasha Road mapka oo keliya markaa kadibna dastuurku u gudbi doono golaha ansixinta. Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa 1 Musharraxa Madaxweynenimada ama ku-Xigeenka Madaxweynaha waxaa soo jeedin karaa xisbiyada siyaasadeed ama wuxuu soomaakiya karaa Musharrax madax-bannaan.
Dastuurka Soomaaliya oo dhamaad ku dhow 16 Maajo Cutubka 15aad Sugidda Nabadda iyo Ammaanka Qaranka. Prev Post Soomaaliya oo ka qeyb galeysa shir uu soo qaban qaabiyey Bangiga Adduunka. Madaxweyne Farmaajo oo shir ugu qeyb galaya dalka Itoobiya. Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub.
Mogadishu, 13 Maay — Soomaaliya ayaa maanta shirweyne qaran oo ka dhacay magaalada Muqdisho ku daah-furtay geeddi-socodka dastuurla dastuurka. Qodobka aad-Awooda Madaxweynaha Awoodaha madaxweynaha waa: Cutubka 13aad – Hay’adaha Dowlad-Goboleedyada.
Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska. Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska 2 Madaxweynuhu marka uu dhisayo Golaha Wasiirrada waa in uu tixgeliyaa qaybaha ay ka kooban tahay bulshada Soomaaliyeed.
Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah.
Latest News English Somalia to develop a national communication strategy on ssoomaaliya and countering violent extremism – Bisha Tobnaad 17, Qodobka aad-Habka Iscasilaadda Madaxweynaha. Baarlamaanka Federaalka waxaa uu doortey Guddi ka kooban 10 xubnood sida uu qabo qodobka aad ee Dastuurka. A password will be e-mailed to you. Madaxweynuhu wuxuu iscasilaadiisa u gudbinayaa Golaha Shacbiga isagoo sii marsiinaya Afhayeenka Golaha Shacbiga.
Shirkaan waxaa ka soo qaybgaley xubnaha baarlamanka, daatuurka, bulshada rayidka iyo bah-wadaagta caalamiga ah.
Guddigan oo loo yaqaan Guddiga La-socodka Dib-u-eegitsa Dastuurka ee Baarlamaanka ayaa la soconaya, tilmaamaya, islamarkaana ansixinaya howlaha Guddiga Madaxbannaan ee Dib-u-eegista Dastuurka, guddigaas oo uu dhisayo Qodobka si uu u sameeyo wax-ka-beddelka Dastuurka iyo qoris shuruucda. Su’aal la xiriirtay in waqtigu gabagaba yahay isla markaasna uusan meesha ka muuqan dastuur weli dayaar ah wasiirku wuxuu sheegay inaysan wanaagsnayn in hawl noocan oo kale ah degdeg ah lagu dhaafo arrintuna tahay mid u baahan in degganaan iyo ka fiirsi badan lana mariyo hannaanka ay u baahan tahay ee sharciga ah.
Qodobka aad-Bannaanaanta Xaafiiska Madaxweyne-Ku-Xigeenka Dastuuria ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa.
Cutubka 6aad Matalaadda Shacabka.
Qormadan gaaban waxaan u qorayaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago fahamkayga mudadii halka sano ku dhowaadka ahayd ee aan ka tirsanaa Guddiga La socodka dib u eegista Dastuurka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya si aan u ifiyo meesha ay wax marayaan iyo caqabadaha jira. Haddii la qaato nidaamka madaxweynennimada nambarada qodobbada hoose way is badalayaan.
Qodobka aad-Dhaarta Madaxweynaha Inta uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku xusan sharciga, soimaaliya lagu hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare dadweynuhu joogaanwaxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamaada Dastuuriga.